Gịnị Ka Anyị Na-efu? Ma ọ bụ'snye Na-efu Anyị? | Martech Zone
Robert Scoble jụrụ, Gịnị ka ndị na-ede blọgụ ọgbara ọhụrụ na-efu? Azụmahịa gị!
The post kụrụ a akwara m. Robert kwuru eziokwu!
Ka m na-agụ ndepụta RSS m kwa ụbọchị, ike gwụrụ m nke otu ihe ahụ ugboro ugboro. Ndi Microsoft na Yahoo! ekwu ozo? Steve Jobs ka na-agba Apple? Ka Facebook na-aga n’ihu na-eto eto nke ukwuu, ego mgbasa ozi ga-aga n’ihu na-a suụ? Kedu ihe onye nchoputa nke ọ bụla mega-dot-com na-eme taa? Willnye ga-ebu ụzọ nweta akụkọ ahụ, TechCrunch, Mashable, Slashdot, VentureBeat or Usoro ihe?
Anaghị m agụ banyere azụmahịa m na-arụ kwa ụbọchị na saịtị ndị ahụ. I nwere ike iche na enweghi ndị ọzọ bidoro n'obodo ahụ ma ọ bụrụ na a gụọ ihe niile ị mere blọọgụ ndị eze. Anyị ndị na-abụghị ụmụ nke dot-com royalties nọ ọdụ n'akụkụ akụkụ ọrụ anyị niile. Anyị na-arụsi ọrụ ike dị ka ndị nọ n’ime ime iji wuo ụlọ ọrụ na-aga nke ọma. Anyị nwee azụmaahịa na-aga nke ọma - mana eze na - echekarị agwaghị ọbara na ndị nkịtị.
N'ikwu eziokwu niile, echere m na ndị anyị na-abụghị ndị nwe ụlọ na-arụ ọrụ ka mma na ya. Anyị na-ewu azụmaahịa na-aga nke ọma na-enweghị isi akụkọ, na-enweghị ego achụmnta ego, yana enweghị ike ịdebanye aha onye ndepụta nke billionaires iji kwado nnukwu echiche anyị. Anyị anaghị anwa ịmatakwu ibe anyị, anyị na-agba mbọ inyere ndị agbata obi anyị aka. Anyị na-akpọ ndị enyi anyị, kpoo aka anyị, ma tinye abalị na ngwụsị izu iji rụọ ọrụ ahụ. Anyị anaghị atụta ihe ịga nke ọma na isi okwu na tebụl Foosball, anyị na-atụle ya na ọrụ na uru.
Anaghị m eme mkpesa - Enwere m obi ike na e nwere ọtụtụ puku mmalite nke teknụzụ gafee mba ahụ nke na-emetụta azụmahịa dị mma ma ọ dịghị eme akụkọ ọ bụla blọọgụ ndị eze. Echere m na Webtrends re-branding na ogbako buru ibu! Ahh… ma ha anọghị na Redmond… ha si Portland. Enweghị eze n'ebe ahụ!
N'ihi ya, akwụsịrị m ị payinga ntị na ha wee tụgharịa blog m n'ime - obodo na ndị enyi m chọrọ ka mụ na ha rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na m apụ n'obodo, ana m agbali ide banyere nke ahụ ga-emetụta ndị ahịa m na ndị na - agụ akwụkwọ m.
Ọ bụrụ na Arrington na Ihe otiti chọrọ n'ezie inyere aka iru ụlọ ọrụ azụmahịa ma kọọ ihe na-emetụta ha, mgbe ahụ ha kwesịrị ịga n'okporo ụzọ ma wepụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a dị na mba ahụ dum. Robert jụrụ ndị na-ede blọgụ ọ kwesịrị ịgbaso… A ga m akwado ka ọ họrọ nke ọ bụla n'ime obodo mepere emepe ọ bụla. Gbakwunye ndị na-ede blọgụ 50 na ndepụta ọgụgụ ya ga-emeghe anya ya!
Kwụsị akụkọ na -echegharị nke onye ọ bụla na-ekpuchi ma chọta nke ọzọ Twitter, nke na-esote Facebook ma ọ bụ ọbụna nke na-esote Google. Gbanyụọ igwe na-aza gị, mechie igbe mbata gị wee banye ụgbọ elu. Ha nọ ebe a! N’ebe a n’Indiana anyị enwetala onyinye onyinye Mira - ma ndị ahọtara aha ha bụ ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị elu na steeti.
Ndị ụlọ ọrụ ndị na-abịa na Mira Awards abụghị ndị na-eme nke ọma, ha na-enyere ndị ahịa Indiana ndị ọzọ aka ka ha nwee ọganiihu. Dịkwa ka Robert kwuru, nke ahụ bụ ihe dị mkpa!
Tags: adobe ahịa ahịa ahịab2b facebookcassalynneimirikitiokwukwoechiche generatorumengwụ ibuumengwụ ibu bọtịnụnyocha pinterestSlideribe edokọbarabọtịnụ ndị na-elekọta mmadụwpsocialite
Nbanye na Cross Media Optimization
Ime ihe ịga nke ọma iji meziwanye nsonazụ
Apr 12, 2009 na 11: 54 PM
Kwuru nke ọma. Echere m na anyị kwesịrị ide ihe banyere anyị celebs. Onwere ụlọ ọrụ dị ịtụnanya dị n'ime ime obodo.
Apr 12, 2009 na 11: 58 PM
Lorraine tiri m ya ihe mana m ga-ekwu ya ọzọ. Kwuru nke ọma!
Apr 13, 2009 na 1: 27 AM
nnukwu post Doug. i chere na mashable ga - ewere akụkọ gi? kwe ka olile anya 🙂
na-egwu egwu niile achọtala m ewu ewu nke mashable na techcrunch ọkachasị maka ịkọ akụkọ ama ama karịa olu n'ime ihe ndị mere na ụlọ ọrụ anyị. akụkọ banyere onye na-ewe iwe na onye na-ahapụ onye ọ bụla / ihe ọ bụla agwakọtara ya na ịkpọ oku ka ọ gbasaa nnukwu nzuzo ma ọ bụ beta karịa ezigbo dissection nke nsogbu / ụlọ ọrụ / niche ụlọ ọrụ. Enwekwara nnukwu ụlọ ọrụ b2c / ngwaahịa. Onweghị ihe dị njọ na nke ahụ, n'ezie, ọ na - eme na b2b dina oke sexy ma ọ na - abụkarị otu oge beta chọrọ. Ihe ịma aka bụ na a naghị akọ akụkọ b2b na otu ụdị akụkọ akụkọ a wuru nke ọma dịka ụlọ ọrụ / ngwaahịa b2c. dị ka ndị nkwusa ozioma na ndị na-ere ahịa na b2b anyị nwere ike ịgbanwe nke a. Echeghị m na ụlọ ọrụ anyị nwere ọchịchị eze na-acha anụnụ anụnụ. ha nile mere onwe-ha. na nke ahụ, ọgbọ ọhụrụ nwere ike ịkwatu na ha ga-eji akụkọ ndị anyị na-agwa. ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ anyị nke ọma.
Apr 13, 2009 na 8: 46 AM
Eeh, eeh, ee! Anyị ga-aga n'ihu na-agbasa ozi ọma banyere akụkọ ọma na otu anyị si enyere ndị ahịa anyị aka itolite, okwu ahụ ga-aga n'ihu ịpụ! Ọ ga-amasị m iche na nke ahụ bụ ozi m kemgbe m bidoro blog a.
Mgbe ihe niile m nwere bụ naanị ndị na - agụ akwụkwọ ole na ole, ebum n’uche m bụ ka m zighachi ozi m chọtara ma nyekwa ndụmọdụ n’ebe ọha na eze ga - echekwa oge. Ozi m gara n'ihu! Ana m abịarute ugbu a karịa.
Apr 13, 2009 na 1: 20 PM
Ok, ya mere emeere m obere ihere, ka anyị lee ma ọ hụrụ. Akpọrọ m Robert Scoble ka ọ bịa Indy maka Mira, wee gwa ya na m ga-azụta tiketi ya maka mmemme ahụ.
Ì chere na ọ ga-akpọrọ m gaa na onyinye m?
Apr 13, 2009 na 2: 30 PM
Aga m mgbawa maka nke ahụ! Ọ ga-amasị Robert ịhụ Mira!
Apr 13, 2009 na 8: 08 PM
Ọ bụ ezie na m kwenyere na gị na Arrington na Scoble, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ha, kwesịrị ịpụ ma mụta banyere ndị na-eguzosi ike n'ihe, na-emegide ndị eze, m ga-atụ aro na ha ga-ahọrọ otu obere obodo na steeti ọ bụla ịchọta onye na-ede blọgụ. enwere uru na ọdịnaya kwesịrị ilele. Gịnị na-eme ka naanị obodo mepere emepe bara uru?
Sue Polinsky kwuru
Apr 16, 2009 na 11: 33 PM
Scoble ga-aza ee ma ọ bụrụ na nhazi oge ahụ kwere NA ogbako ahụ na-adọrọ mmasị. Ọ na-aga ConvergeSouth ugboro abụọ (na Greensboro NC) naanị n'ihi na anyị jụrụ ya (oge mbụ) na ọ hụrụ ya n'anya (ya mere ọ laghachiri nke ugboro abụọ maka pudding banana). NB: oburu na ogosiputara, dozie ubochi ya zuru. Ọ chọrọ ịga ebe dị iche iche ma zute ndị mmadụ wee mee ihe (teknụzụ na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị). Debe ya n’ọrụ ma nye ya sushi dị mma.
ConvergeSouth anaghị akwụ ndị ọkà okwu ụgwọ; Otú ọ dị, anyị na-akwụkarị ụgwọ ụgbọelu na họtel maka ndị na-eweta ọbịbịa n'obodo. Obodo anyi (n'egosighi obi oke ala) na ere onwe ya. Nye ya nnukwu ọnụ ụlọ ikwu okwu; ọ na-adọta ọtụtụ mmadụ 🙂
Jisie ike; ka anyị mara ma ọ bụrụ na ịchọrọ Sgba Ego!
Apr 17, 2009 na 6: 50 PM
Nke a bụ nnukwu ozi ọma! Anyị akpọkọtala ndị agha taa ma nwee obi ụtọ ịbanye Robert n'obodo ahụ. Anyị ga-ejide n’aka na anyị ga-elekọta ya ma nwee obi ike na ọ ga-enwe obi ụtọ na ọrụ anyị na-arụ n’ebe a na Indy.
Enyere m gị ahịrị iji soro!
Apr 16, 2009 na 11: 57 PM
Enwere m mgbagwoju anya, gịnị kpatara trackback a na 2007 nke m? Ahụghị m njikọ ya na edemede ahụ dị n'elu. Ana m efu ya?
Apr 17, 2009 na 6: 51 PM
Odighi ama ma obi di m uto ka ikwusi!
Apr 19, 2009 na 12: 38 PM
otu ihe ahụ mere na blọọgụ m, na post 2007. Kedu ihe mere ebe a?
Apr 19, 2009 na 3: 15 PM
Ndewo Dale! Kedu saịtị ị na-abịa? Aga m enyocha trackbacks m hụ ma ọ bụ na e zigara gị ihe ọ bụla. Ana m anwale teknụzụ ọhụụ oge niile ma na-anwale ụfọdụ ngwaọrụ ọchụchọ na-achọta ihe ndị yiri ya - ejighi n'aka ma ha na-eziga ha. Enwere ike ihichapụ trackback ma ọ bụrụ na ọdabara.